प्रहरीलाई घुुस दिन खोज्ने ११४ पक्राउ, १० रुपैयाँदेखि ४५ सयसम्म घुस | Diyopost
प्रहरीलाई घुुस दिन खोज्ने ११४ पक्राउ, १० रुपैयाँदेखि ४५ सयसम्म घुस
काठमाडौं, जेठ ८ । उपत्यकाभित्र ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई घुस दिन खोज्ने एक सय १४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्ने अधिकांश चालक छन् । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको तथ्यांकअनुसार पक्राउ परेकाले प्रहरीलाई १० रुपैयाँदेखि चार हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म घुस दिन खोजेका थिए ।
पछिल्लो ६ महिनामा टिपर, बस, ट्रक, ट्याक्सी र बलेरोका गरी ९३ चालक र ६ जना सहचालक पक्राउ परेका हुन् । १५ जना मोटरसाइकलचालक पनि पक्राउ परेका छन् । प्रहरीलाई घुस दिन खोजिएको रकम ८२ हजार दुई सय १० रुपैयाँ पुगेको छ ।
रानीपोखरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी श्याम ज्ञवालीले घुसमा प्रहरीले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताए । उनले भने, ‘पछिल्ला दिन प्रहरीले घुस लिने र दिनेमा शून्य सहनशीलता नीति लागू गरेको छ । घुस लिने र दिने कोही भेटिए ठाउँका ठाउँ कारबाही गरिने सर्कुलर छ । यो परिणाम यसैको प्रभाव हो । यसलाई प्रहरीले अझ कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजानेछ ।’
प्रहरीका अनुसार अधिकांश चालकले सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा ब्लुबुक नभएपछि प्रहरीलाई घुस दिने प्रयास गरेका छन् । मादकपदार्थ सेवन(मापसे) गरी सवारीसाधन चलाउनेले पनि प्रहरीलाई घुस दिन खोजेका छन् । तर, प्रहरीले घुस दिनेलाई नै पक्राउ गर्न थालेपछि पछिल्ला दिन घुसको घटनामा कमी आएको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार केही महिनामा ट्राफिक प्रहरीले मात्रै घुस दिन खोज्ने ५३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्ने अधिकांश चालक रहेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी वसन्त पन्तले बताए । उनले भने, ‘ट्राफिक प्रहरीले प्रत्येक दिन मापसे जाँच गर्छ । यस क्रममा लाइसेन्स र ब्लुबुक जाँच हुने नै भयो । जसको कागजपत्रमा गडबड छ, उसले प्रहरीलाई घुसको अफर गर्छ । तर, प्रहरीले त्यस्ता चालकलाई पक्राउ गरेको छ ।’
अधिकांश १० हजार धरौटीमा रिहा
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार घुस दिन खोज्ने अधिकांशलाई १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको छ । पछिल्ला दिन पक्राउ परेकाहरूको हकमा भने अनुसन्धान बाँकी नै रहेकाले उनीहरू प्रहरी हिरासतमै छन् । परिसर प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीले ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई घुस दिन खोज्नेहरू धमाधम पक्राउ परेको घटनाबाट जनमानसमा ठूलो मनोवैज्ञानिक सन्देश जाने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘ड्युटीमा रहेका प्रहरी जवानलाई १० रुपैयाँदेखि चार हजार पाँच सय रुपैयाँसम्मको घुस अफर आएको छ । परिणामको हिसाबले न्यून भए पनि धमाधम पक्राउ पर्नुले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । यसले प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता बढाउँछ ।’ नयाँपत्रिका दैनिकबाट
ललितपुर महानगरका मेयरलाई कोरोना पुष्टि
रिद्धि सिद्धि सिमेन्टको अबैध धन्दा : ईजाजत बिनै राष्ट्रिय वनमा उत्खनन् गरेको खुलाशा !
एभिन्युज टिभिका मालिक भाष्करराज राजकर्णिकार ‘जग्गा दलाली धन्दा’मा : ठगीको आरोप !
जेटियुसिसिद्वारा विमानस्थल ट्याक्सी चालकलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
यी हुन् डा. गोविन्द केसीलाई गाडीबाट जबरजस्ती निकाल्ने डिएसपी !
करिअरमा खेलवाड गरेको भन्दै नेपाल प्रहरी अस्पतालका ४२ जना चिकित्सकले राजिनामा दिए !